Barrow oo Madaxweyne ku Xigeen Magacaabay
Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia Adama Barrow ayaa u magacaabay madaxweyne ku xigiinkiisa haweeneey door weyn ka ciyaartay in kooxaha mucaaradka ay u midoobaan sidii ay awoodda uga qaadi lahaayeen madaxweynihi hore Yahya Jammeh.
Weerar lagu Qaaday Banki ku Yaalla Mandheera
Wararka ka imaanaya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegaya in xalay weerar lagu qaaday Banki ku yaalla magaalada Mandheera.
Daroogo 500 oo KG ah oo lagu Gubay Jabuuti
Xukumadda Djibouti ayaa maanta soo bandhigtay shixnad daroogada nooca Kokeynka loo yaqaan ah oo lagu qiyaasay inay ku kaceyso boqol milyan oo dollar.
Gambia: Adama Barrow oo Banjul Tagaya
Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia, Adama Barrow ayaa lagu wadaa in maanta uu gaaro xarunta dalka ee Banjul, ka dibna markii madaxweynihii hore, Yahye Jammeh uu ogolaaday inuu dalka ka baxo.
Barrow oo Sheegay inuu ku Laabanayo Gambia
Madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka Galbeedka Africa ku yaala ee Gambia Adama Barrow, ayaa fariin uu soo dhigay bogiisa Twitterka ku sheegay maanta oo Sabti ah inuu dalkiisa dib ugu noqonayo si uu awoodda ula wareego.
Millatariga Senegal oo Gudaha u Galay Gambia
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa u aqoonsaday Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia, Adama Barrow inuu yahay hogaamiyaha sharciga ah, xilli madaxweyne Yahya Jammeh uu wali diidanyahay inuu awooda wareejiyo.
Fallanqeyn: Faro-gelinta lagu Sameynayo Gambia
Waddamada Galbeedka Afrika oo ay ugu horreeyaan Senegal iyo Nigeria ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ciidamo u diraan dalka Gambia, waxaana maanta ku eg muddada loo qabtay in madaxweyne Yahya Jammeh uu xilka ku wareejiyo Adama Barrow.
Barrow oo Lagu Caleemo Saarayo Senegal Madaxweynaha la doortay ee dalka Gambia Adama Barrow ayaa maanta sheegay in caleemo saarkiisa lagu qaban doono safaaradda Gambia ee dalka deriska la ah ee Senegal, kadib markii hoggaamiyaha muddada dheer hayey talada Yahya Jammeh uu diiday inuu xukunka ka dego.
Khadka Tareen ee Jabuuti iyo Ethiopia oo la Furay
Khad tareen oo isku xiraya dalalka Jabuuti iyo Ethiopia ayaa maanta waxaa si rasmi ah xariga looga jaray munaasabad ka dhacda dalka Jabuuti.
Xaaladda Ivory Coast oo Maanta Dagan
Xaaladda magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ivory Coast ee Bowaake ayaa maanta degan kadib marki ay isaga baxeen ciidamo ka tirsan Milatariga oo muddo laba maalmood ah halkaasi ka waday kacdoon.